WaaMaxay casharka laga baran karo dadaaladii lagu soo badbaadinayay Wilkii yaraa Reer Marooko ee geeriyooday – SOMALI RADIO ONAIR
WaaMaxay casharka laga baran karo dadaaladii lagu soo badbaadinayay Wilkii yaraa Reer Marooko ee geeriyooday
Boqor Maxamed-ka Marooko ayaa tacsi u diray waalidiinta wiilka dhintay ka dib markii uu ceel ku dhacay maalintii Talaadada ahayd iyadoo tan maalintaas-na la waday dedaallo lagu soo bad-baadinayay.
Rayan ayaa ugu dambeyn xalay laga soo saaray ceelka soddonka mitir ah, ka dib markii ay sameeyeen gurmad ballaaran oo soo jiitay indhaha caalamka. Markii laga soo saaray ceelka waxaa goobtii ka qaadday Ambalaas balse geeridiisa ayaa la xaqiijiyay waxyar kadib uun markii la qaaday.
Bayaan ka soo baxay boqortooyada ayaa lagu shaaciyay geerida wiilka waxyar uun kaddib markii laga soo saaray ceelka kaddib dedaal muddo dheer qaatay oo la doonayay in lagu soo samatabixiyo.
Boqor Maxamed-ka 6-aad oo ah boqorka dalkaasi Marooko ayaa u tacsiyeeyay waalidiinta dhalay Rayan.
Muuqaal Khamiistii lagu soo duubay kaamaro hoos loogu dhaadhiciyay ceelka ayaa muujisay wiilka oo nool dareenkiisuna uu joogo, hasayeeshee wixii markaas ka dambeeyay ma jirin xog kale oo dheeraad ah oo ku saabsan xaaladdiisa.
Waxaa aad looga walwalsanaa sida uu ku helayo neefta Oxygen-ta ilaa inta laga soo bixinayo.
Waxaa lasoo tabiyay in wiilka yar uusan wax cunin waxna cabin muddo shan maalmood ah. Sidoo kale khubarada caafimaadka ayaa ka walwalsan in maadaama ceelka uu ku dhacay uu aad u dheeryahay ay dhaawacyo gaadheen.
Heer kulka gobolka ayaa gaadha heer aad u sarreeya oo noqon kara 40 digrii ilaa 50 digrii, taasoo dhibaato weyn ku noqoneysa qof god ku jira.
Midowga Afrika oo Ergay Cusub u soo magacaabay Soomaaliya